Get Yangon Directory and Win Lucky Draw Prizes | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
ရန်ကုန်လမ်းညွှန် ၂၀၂၁ စာအုပ်တစ်အုပ် သင့်လက်ထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုရင် သိန်း (၄၀၀) ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆုလက်ဆောင်တွေကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးပြီလား။
3U Campaign: Lucky Draw အစီအစဉ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ…?
ရန်ကုန်လမ်းညွှန်နဲ့ မန္တလေးလမ်းညွှန် စာအုပ်တိုင်းမှာ ဂဏန်း (၅) လုံးပါ Unique ID နံပါတ်တစ်ခုစီ ပါဝင်ပါတယ်။ (၂) ပတ်တစ်ခါ တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၇) နာရီမှာ Yangon Directory Facebook Page ကနေ4Digits နောက်ဆုံး (၄) လုံး၊3Digits နောက်ဆုံး (၃) လုံးနဲ့2Digits နောက်ဆုံး (၂) လုံး နံပါတ်တွေကို မဲနှိုက် ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဲနှိုက်လိုက်တဲ့ နံပါတ်တွေနဲ့ လူကြီးမင်းမှာရှိတဲ့ စာအုပ်ပေါ်က Unique ID No. နောက်ဆုံးဂဏန်း ၄ လုံး (သို့) ၃ လုံး (သို့) ၂ လုံး တူညီမယ်ဆိုရင် သိန်း (၄၀၀) ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆုလက်ဆောင်များကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
4 Digits ဆိုရင်...
ကမ္ဘာကျော် Furniture Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Herman Miller ရဲ့ Aeron Chair နဲ့ Mirra2Work Chair
အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် နာမည်ကြီးကားတွေဖြစ်တဲ့ Aston Martin၊ Discovery Sport (Corris Grey and Scotia Grey) နှင့် Range Rover (Fuji White) ကား (၄) စီးထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်စီးကို ဝယ်ယူပါက သိန်း (၅၀) လျော့ပေးမယ့် Discount Coupon
3 Digits ဆိုရင်...
နာမည်ကြီး Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Louis Vuitton ရဲ့ ယောက်ျားသုံး ဘေးလွယ်အိတ်
အလိုအလျောက် ဖုန်တွေကို ရှင်းလင်းပေးမယ့် ချစ်စရာ iRobot ဖုန်စုပ်စက်
Game ဆော့တတ်တဲ့ လူကြီးလူငယ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ Xbox One Console & Controller - 500GB (Black)
Remote Controller ပါပြီးတော့ ပျံသန်းလို့ရတဲ့ ကစားစရာ RC Millennium Falcon
ကလေးငယ်တွေအတွက် သင်ကြားရေးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အပြင် ကစားလို့ရတဲ့ Osmo Genius Family Starter Kit
2 Digits ဆိုရင်...
လူကြီးမင်းရဲ့ Camera ကို စိတ်ချလက်ချထည့်သိမ်းပြီး သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Cannon PowerShot Bag
ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရောင်စုံမီးလေးနဲ့ Disco Dance ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Colour Changing Bath Light
နူးညံ့တဲ့ ဂွမ်းအသားနဲ့ ဘယ်နေရာသွားသွား Laptop ကိုထည့်သွားနိုင်မယ့် K Model Laptop Bag
MMRD Trading က ထုတ်တဲ့ ထိုင်ခုံနဲ့ ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေ
မီးဖိုချောင်နဲ့ ရေချိုးခန်းသုံး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ
သာလွန်နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝပေးနိုင်မယ့် Pillow တွေ
လူကြိုက်များပြီး သယ်ဆောင်ရ အဆင်ပြေတဲ့ Memory Foam Travel Pillow တွေနဲ့
လူကြီးလူငယ်မရွေး အကြိုက်တွေ့စေမယ့် အရုပ်တွေ စတဲ့ ဆုမဲပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကို မဲနှိုက် ကံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်လမ်းညွှန်စာအုပ် လိုအပ်သူများနဲ့ မေလ စာအုပ်ဝေစဉ်က မရရှိလိုက်သူများအတွက် နိုဝင်ဘာ (၁၀) ရက်နေ့က စတင်ပြီး ရန်ကုန်ရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှာ အခမဲ့ ဝေပေးနေပါတယ်။ စာအုပ်ဝေတဲ့ အချိန်က မရလိုက်ဘူး ဆိုရင်လည်း ရန်ကုန်လမ်းညွန် ရုံးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ရွှေပြည့်စုံစျေး၊ ၈ လွှာနဲ့ City Mall ရှိ MMRD Office Living Showroom မှာ ရုံးချိန်အတွင်း အခမဲ့ လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Lucky Draw Winner Number တွေကို အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၇) နာရီမှာ မဲနှိုက် ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလက်ဆောင်တွေကို Live လွှင့်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ( တနင်္လာနေ့မှ ကြာသပတေးနေ့အထိ၊ မနက် (၁၀) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအထိ ) ရန်ကုန်လမ်းညွှန်ရုံးချုပ်မှာ လာရောက် ကံစမ်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Lucky Draw Winners Number တွေနဲ့ ဆုတွေအကြောင်း တစ်ခုချင်းစီ အသေးစိတ်ကို အောက်ကလင့်ခ်တွေမှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။
စာအုပ် အခမဲ့ ရယူနိုင်သည့် နေရာများ
3U Lucky Draw Campaign ဆိုတာ ဘာလဲ...?
Content > https://cutt.ly/kYf12BM
Lucky Draw မှာ ပါဝင်တဲ့ ဆုလက်ဆောင်များ
4 Digits > https://cutt.ly/tPTMHNg
3 Digits > https://cutt.ly/gPJ5HqJ
2 Digits > https://cutt.ly/sPJ5UBa
Lucky Draw Live နဲ့ ကံထူးတဲ့ နံပါတ်များ
Episode 1 > https://fb.watch/9JzAT1aIGB
Episode2> https://cutt.ly/JYF6eAX
Episode3> https://cutt.ly/bUqc6tM
Episode4> https://cutt.ly/oUzGQCL
Episode5> https://cutt.ly/eIQRKFN
Episode6> https://cutt.ly/rOkceyE
Episode7> https://fb.watch/bhYgWoHFiL/
Episode 8 > https://cutt.ly/oAmyy5d
Lucky Draw Winners များ
Episode 1 > https://cutt.ly/wYF54pw
Episode2> https://cutt.ly/WY89b5Z
Episode3> https://cutt.ly/uUhjIRQ
Episode5> https://cutt.ly/AOkWsEG
Episode6> https://cutt.ly/wPJ5lPE
Episode7> https://cutt.ly/OP6M9gz
ဘာပဲလိုလို ရန်ကုန်လမ်းညွှန်နဲ့ မန္တလေးလမ်းညွှန် ရှိတယ်။